ရှငှေေ ရတနာ သိနျး ( ??? ) ကြျော ဖောကျ ထှငျး ခိုးယူ သှားပွီးမှ သိနျး ( ??? ) ကြျော ပွနျလာ ထားပေးသှား တဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ ဖောကျထှငျးသူခိုး – 7Day Update News
ရှငှေေ ရတနာ သိနျး ( ??? ) ကြျော ဖောကျ ထှငျး ခိုးယူ သှားပွီးမှ သိနျး ( ??? ) ကြျော ပွနျလာ ထားပေးသှား တဲ့ ထူးဆနျးတဲ့ ဖောကျထှငျးသူခိုး
ခငျဦး မွို့ကအလှနျ ထူးဆနျးတဲ့ ဖောကျထှငျးမှု ရှငှေရေတနာသိနျး(၅၀၀) ကြျောဖိုးပွနျတှပွေီ့ .. စဈကိုငျးတိုငျးဒသေကွီး၊ ရှဘေိုခရိုငျ၊ ခငျဦးမွို့နယျ ပငျတငျးကြေးရှာ၌ ဖောကျထှငျးခိုးယူခံရသော ရှေ၊ ငှရေတနာတနျဖိုးငှသေိနျး(၇၅၀) ကြျောဖိုးမှသိနျး(၅၅၀)ကပျြဖိုးခနျ့ ပွနျလညျရရှိကွောငျးမွို့မရဲစခနျးမှသိရသညျ။
နိုဝငျဘာ၎ရကျနညေ့၉နာရီခနျ့ကခငျဦးမွို့နယျပငျတငျးကြေးရှာလမျးဘေးရှိဝနျးထရံ၌ခြိတျထားသောမသင်ျကာစရာအထုပျတဈထုပျ တှရှေိ့ရကွောငျး ကြေးရှာအုပျခြုပျရေးမှူးမှရဲစခနျးသို့အကွောငျးကွားသဖွငျ့
မွို့မရဲစခနျးမှူး ဒုရဲမှူးဇျောဆှေ၊ နယျထိနျးခေါငျးဆောငျဒုရဲအုပျ ကြျောလငျးဖွိုးတို့ဦးဆောငျသော တပျဖှဲ့ဝငျမြားသညျ၎င်းငျးအိတျထဲမှ ရှထေညျပစ်စညျး ၂၂မြိုးနှငျ့ ငှစေက်ကူငါးထောငျတနျ(၁)ရှကျ၊ နှဈရာတနျ (၁)ရှကျ၊တဈရာတနျ (၂)ရှကျ၊ငါးဆယျတနျ(၂)ရှကျ၊ရှေဘောကျခြာ(၇)ရှကျတို့အား တှရှေိ့သဖွငျ့ ဖောကျထှငျးဖိုးယူခံရသော ပစ်စညျးမြားဟုတျမဟုတျစဈဆေးနစေဉျ
ဖောကျထှငျးခိုးယူခံရသောအိမျ၏မွောကျဘကျ ကောကျရိုးစဉျအောကျရှိနှားခြေးပုံဘေးတှငျ ရှလေကျကောကျ (၂)ကှငျးထပျမံတှရှေိ့ရကွောငျးသိရသညျ။ဖောကျထှငျးခိုးယူခံထားရသော ရှေ၊ ငှေ ရတနာ ပစ်စညျးမြိုးစုံ ၂၆မြိုး၊ တနျဖိုးငှစေုစုပေါငျးသိနျး (၇၅,၅၅၀,၀၀၀)ကပျြမှ ရှထေညျပစ်စညျး (၂၃)မြိုး၊ တနျဖိုးငှေ စုစုပေါငျး သိနျး (၅၅,၅၀၀,၀၀၀)ကပျြ ပွနျလညျရရှိပွီးဖွဈကွောငျးနှငျ့
ကနျြရှိနသေော ရှထေညျပစ်စညျး ၃မြိုး၊ ငှေ၈၃သိ နျးကပျြနှငျ့အတူတရားခံအမွနျဆုံးဖျောထုတျဖမျးဆီးရမိရေးအတှကျအပူတပွငျးဆောငျရှကျနကွေောငျးသိရသညျ။ဖွဈစဉျ မှာ နိုဝငျဘာ၁ရကျနေ့ နံနကျ၉နာရီခနျ့က ခငျဦးမွို့နယျ ပငျတငျးကြေးရှာနေ ဒျေါညိုညိုဦးသညျ ခငျပှနျးဖွဈသူ ဦးဝငျးအောငျနှငျ့အ တူ လယျတောသို့
သှားရောကျ၍ ယောက်ခမဖွဈသူဦးဘကွညျနှငျ့ မမာမာခိုငျတို့သညျ ဘုနျးကွီးကြောငျးသို့ ဥပုသျစောငျ့သှားရောကျခဲ့ကွရာ နေ အိမျသို့ ပွနျလညျရောကျရှိလာကွပွီး အိမျလုပျငနျးမြား လုပျကိုငျ၍ နအေိမျအောကျထပျရှိ အိပျခနျးအတှငျး ရှငျးလငျးရနျ ဝငျရောကျခဲ့ရာ ၎င်းငျး ဒျေါညိုညိုဦးတို့၏အိပျခနျးနှငျ့ အိမျအပျေါထပျရှိ
မမာမာခိုငျအိပျသညျ့အိပျခနျး အခနျးတံခါးသော့မြားမှာ ပကျြစီးနပွေီးအခနျး အတှငျးရှိ သံသတ်ေတာအား ခတျထားသညျ့ သော့ကှငျးမြားမှာဖွတျထားသညျကိုတှရှေိ့ရသဖွငျ့ သတ်ေတာမြားအား ဖှငျ့ကွညျ့ရာ.. ရှေ၊ငှရေ တနာ ပစ်စညျးမြိုးစုံ၂၆မြိုး တနျဖိုးငှေ (၆၇,၂၅၀၀,၀၀)ကပျြနှငျ့ ငှစေက်ကူရောရာ(၈,၃၀၀,၀၀၀)ကပျြ၊ စုစုပေါငျး
တနျဖိုးငှကေပျြ (၇၅,၅၅၀,၀၀၀) ကပျြ ဖောကျထှငျးခိုးယူခံရသဖွငျ့ ဒျေါညိုညိုဦး ပငျတငျးကြေးရှာ၊ ခငျဦးမွို့နယျနသေူက တရားလိုပွုလုပျ၍ နိုဝငျဘာ ၂ရကျနေ့ နေ့ ၂ နာရီ ခနျ့က ခငျဦးမွို့မရဲစခနျးမှ(ပ)၃၅၆/၂၀၂၀၊ ရာဇသတျကွီးဥပဒပေုဒျမ-၄၅၄ဖွငျ့ အမှုဖှငျ့တိုငျကွားထားခဲ့ကွောငျး သိရသညျ။
ရွှေငွေ ရတနာ သိန်း ( ??? ) ကျော် ဖောက် ထွင်း ခိုးယူ သွားပြီးမှ သိန်း ( ??? ) ကျော် ပြန်လာ ထားပေးသွား တဲ့ ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းသူခိုး
ခင်ဦး မြို့ကအလွန် ထူးဆန်းတဲ့ ဖောက်ထွင်းမှု ရွှေငွေရတနာသိန်း(၅၀၀) ကျော်ဖိုးပြန်တွေ့ပြီ .. စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ ရွှေဘိုခရိုင်၊ ခင်ဦးမြို့နယ် ပင်တင်းကျေးရွာ၌ ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသော ရွှေ၊ ငွေရတနာတန်ဖိုးငွေသိန်း(၇၅၀) ကျော်ဖိုးမှသိန်း(၅၅၀)ကျပ်ဖိုးခန့် ပြန်လည်ရရှိကြောင်းမြို့မရဲစခန်းမှသိရသည်။
နိုဝင်ဘာ၎ရက်နေ့ည၉နာရီခန့်ကခင်ဦးမြို့နယ်ပင်တင်းကျေးရွာလမ်းဘေးရှိဝန်းထရံ၌ချိတ်ထားသောမသင်္ကာစရာအထုပ်တစ်ထုပ် တွေ့ရှိရကြောင်း ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှူးမှရဲစခန်းသို့အကြောင်းကြားသဖြင့်
မြို့မရဲစခန်းမှူး ဒုရဲမှူးဇော်ဆွေ၊ နယ်ထိန်းခေါင်းဆောင်ဒုရဲအုပ် ကျော်လင်းဖြိုးတို့ဦးဆောင်သော တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည်၎င်းအိတ်ထဲမှ ရွှေထည်ပစ္စည်း ၂၂မျိုးနှင့် ငွေစက္ကူငါးထောင်တန်(၁)ရွက်၊ နှစ်ရာတန် (၁)ရွက်၊တစ်ရာတန် (၂)ရွက်၊ငါးဆယ်တန်(၂)ရွက်၊ရွှေဘောက်ချာ(၇)ရွက်တို့အား တွေ့ရှိသဖြင့် ဖောက်ထွင်းဖိုးယူခံရသော ပစ္စည်းများဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးနေစဉ်
ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသောအိမ်၏မြောက်ဘက် ကောက်ရိုးစဉ်အောက်ရှိနွားချေးပုံဘေးတွင် ရွှေလက်ကောက် (၂)ကွင်းထပ်မံတွေ့ရှိရကြောင်းသိရသည်။ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံထားရသော ရွှေ၊ ငွေ ရတနာ ပစ္စည်းမျိုးစုံ ၂၆မျိုး၊ တန်ဖိုးငွေစုစုပေါင်းသိန်း (၇၅,၅၅၀,၀၀၀)ကျပ်မှ ရွှေထည်ပစ္စည်း (၂၃)မျိုး၊ တန်ဖိုးငွေ စုစုပေါင်း သိန်း (၅၅,၅၀၀,၀၀၀)ကျပ် ပြန်လည်ရရှိပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့်
ကျန်ရှိနေသော ရွှေထည်ပစ္စည်း ၃မျိုး၊ ငွေ၈၃သိ န်းကျပ်နှင့်အတူတရားခံအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးရမိရေးအတွက်အပူတပြင်းဆောင်ရွက်နေကြောင်းသိရသည်။ဖြစ်စဉ် မှာ နိုဝင်ဘာ၁ရက်နေ့ နံနက်၉နာရီခန့်က ခင်ဦးမြို့နယ် ပင်တင်းကျေးရွာနေ ဒေါ်ညိုညိုဦးသည် ခင်ပွန်းဖြစ်သူ ဦးဝင်းအောင်နှင့်အ တူ လယ်တောသို့
သွားရောက်၍ ယောက္ခမဖြစ်သူဦးဘကြည်နှင့် မမာမာခိုင်တို့သည် ဘုန်းကြီးကျောင်းသို့ ဥပုသ်စောင့်သွားရောက်ခဲ့ကြရာ နေ အိမ်သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာကြပြီး အိမ်လုပ်ငန်းများ လုပ်ကိုင်၍ နေအိမ်အောက်ထပ်ရှိ အိပ်ခန်းအတွင်း ရှင်းလင်းရန် ဝင်ရောက်ခဲ့ရာ ၎င်း ဒေါ်ညိုညိုဦးတို့၏အိပ်ခန်းနှင့် အိမ်အပေါ်ထပ်ရှိ
မမာမာခိုင်အိပ်သည့်အိပ်ခန်း အခန်းတံခါးသော့များမှာ ပျက်စီးနေပြီးအခန်း အတွင်းရှိ သံသေတ္တာအား ခတ်ထားသည့် သော့ကွင်းများမှာဖြတ်ထားသည်ကိုတွေ့ရှိရသဖြင့် သေတ္တာများအား ဖွင့်ကြည့်ရာ.. ရွှေ၊ငွေရ တနာ ပစ္စည်းမျိုးစုံ၂၆မျိုး တန်ဖိုးငွေ (၆၇,၂၅၀၀,၀၀)ကျပ်နှင့် ငွေစက္ကူရောရာ(၈,၃၀၀,၀၀၀)ကျပ်၊ စုစုပေါင်း
တန်ဖိုးငွေကျပ် (၇၅,၅၅၀,၀၀၀) ကျပ် ဖောက်ထွင်းခိုးယူခံရသဖြင့် ဒေါ်ညိုညိုဦး ပင်တင်းကျေးရွာ၊ ခင်ဦးမြို့နယ်နေသူက တရားလိုပြုလုပ်၍ နိုဝင်ဘာ ၂ရက်နေ့ နေ့ ၂ နာရီ ခန့်က ခင်ဦးမြို့မရဲစခန်းမှ(ပ)၃၅၆/၂၀၂၀၊ ရာဇသတ်ကြီးဥပဒေပုဒ်မ-၄၅၄ဖြင့် အမှုဖွင့်တိုင်ကြားထားခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
နိုငျငံသားတဈယောကျရဲ့ တာဝနျကို ကပြှေနျခဲ့စှာမဲပေးခဲ့ကွတဲ့ အနုပညာရှငျတို့ရဲ့ ပုံရိပျမြား
မွနျမာ့အလံကိုကိုငျဆောငျပွီး ပွိုငျဘကျဆိုငျးရပျဈဝါရှငျတနျကို ၅ ခြီအတှငျး အလဲထိုးမယျဆိုတဲ့ ဒဗျေ့